Anaan mana fayaa Siouxland akka guyyaa har’aa gabaasanitti namni haarawa sababa Covid-19 Woodbury Co | KWIT
Anaan mana fayaa Siouxland akka guyyaa har’aa gabaasanitti namni haarawa sababa Covid-19 Woodbury County keessati due 2 yoo tua namni haarawa qabame ammo 210 dha. Namni qabame parsantiin wayta kaahamu 6% dha. Namni hospitaala gale ammo parsantii 15% kan dabalee yoo tau hospitaala Sioux City lama keessati dhukubsattoota 14 ttuu yaalamu jira. Akka state waliigalatti namni hospitaala jiru nama 241 dha, dhukubsattooni 60 intensive care keessa jiru. Kuni ammo guyyaa duura jiru irraa kan xiqqaateedha.
Woodburry County keessati namni dabalataa qabame 18 dha. Akka waliigalatti, see’ati 24 keessati namni waliigalatti haarawa qabame 550 yoo tau kan du’emmoo 15 dha.
Iowa Governor Kim Reynolds million $36.5 manneen barnootaatif kan dabalu yoo tau garuu taxer dabaluukan jalqabu yoo tau maneen barnoota 137 keessati warri ijoole 7,000 ta’an sababa corona virus kan manaa qaban ta’uu himaan. Ogeessi Sioux City Community School akka jedhetti sababa coronavirus barattoota 200 ol akka dhabee jiru himan.
Walitti aansudhan wagga lamafaa Sioux City annual St. Patrick’s Day dhaaf hiriira kan qopheessan sababa corona virus dhaaf dhiisani jiran.
Facebook irrati wanni gadhiifame akka jedhutti “bara 2022 keessati qophii guddaa kan fayyaan keenna irrati eegame qopheesinee waamudhaf abdii qabna” kan jedhu maxxansanii jirani.